Dhina anobatwa chibharo (1-12)
Vanakomana vaJakobho vanonyengera vanhu (13-31)
34 Dhina mwanasikana waJakobho waakabereka naReya,+ aiwanzoenda kunotandara nevasikana* vemunyika iyoyo.+ 2 Shekemu mwanakomana waHamori muHivhi,+ muchinda wenyika yacho, paakamuona, akabva amutora, akamubata chibharo. 3 Akanga asisade kusiyana naDhina,* mwanasikana waJakobho, uye akada musikana wacho, akaramba achimunyengetedza. 4 Shekemu akazoti kuna Hamori+ baba vake: “Ndiwanirei musikana uyu kuti ave mudzimai wangu.” 5 Jakobho paakanzwa kuti Shekemu akanga asvibisa Dhina mwanasikana wake, vanakomana vake vakanga vari kumafuro nezvipfuwo. Saka Jakobho akaramba akanyarara kusvikira vadzoka. 6 Hamori, baba vaShekemu, vakazoenda kunotaura naJakobho. 7 Asi vanakomana vaJakobho vakazvinzwa vakabva vangodzoka kubva kumafuro. Vakarwadziwa nazvo uye vakashatirwa nekuti akanga anyadzisa Israeri nekurara nemwanasikana waJakobho,+ chinova chinhu chaisatombofanira kuitwa.+ 8 Hamori akataura navo achiti: “Mwanakomana wangu Shekemu ari kuda mwanasikana wenyu.* Ndapota, mupei ave mudzimai wake, 9 uye ngatirooreranei. Tipei vanasikana venyu, imi motorawo vanasikana vedu.+ 10 Munogona henyu kugara nesu, moita zvamunoda munyika yedu. Garai mutengese henyu zvinhu zvenyu muwane pfuma imomo.” 11 Shekemu akabva ati kuna baba vaDhina nehanzvadzi dzake: “Ndinzwirei nyasha, uye ndichakupai chero chamunoda. 12 Ndinokupai henyu chero chamungataura kuti munoda, kunyange roora rakakura zvakadii uye chipo chakakura zvakadii.+ Chingondipai musikana wacho kuti ave mudzimai wangu.” 13 Vanakomana vaJakobho vakapindura Shekemu nababa vake Hamori nekunyengera nekuti akanga asvibisa Dhina hanzvadzi yavo. 14 Vakati kwavari: “Hatigoni kuita zvakadaro, kupa hanzvadzi yedu murume asina kuchecheudzwa,*+ nekuti izvozvo zvinotinyadzisa. 15 Kuti tibvumirane nemi munofanira kuita izvi: checheudzai vanhurume venyu vese kuti mufanane nesu.+ 16 Tichabva takupai vanasikana vedu, uye tichatorawo vanasikana venyu, uye tichagara nemi tova vanhu vamwe. 17 Asi kana mukasatiteerera morega kuchecheudzwa, tichabva tatora mwanasikana wedu toenda.” 18 Zvavakataura zvakafadza Hamori+ naShekemu, mwanakomana waHamori.+ 19 Jaya racho harina kunonoka kuita zvavakanga vataura,+ nekuti rakanga rafadzwa nemwanasikana waJakobho uye ndiro raikudzwa kwazvo muimba yese yababa varo. 20 Saka Hamori nemwanakomana wake Shekemu vakaenda kugedhi reguta, vakataura nevarume veguta ravo+ vachiti: 21 “Varume ava vanoda kuti tigarisane. Regai vagare munyika vatengese zvinhu zvavo mairi, nekuti nyika yacho yakakura zvekuti vanokwanisa kugara havo. Tinogona kutora vanasikana vavo kuti vave madzimai edu, uye tinogona kuvapa vanasikana vedu.+ 22 Varume vacho vachabvuma kugara nesu kuti tive vanhu vamwe kana tangoita izvi chete: vanhurume vedu vese ngavachecheudzwe sekuchecheudzwa kwavakaitwa.+ 23 Hamufungi kuti zvinhu zvavo nepfuma yavo nezvipfuwo zvavo zvese, zvingabva zvava zvedu? Saka ngatingobvumiranei navo kuti vagare nesu.” 24 Vese vaibuda negedhi reguta rake vakateerera Hamori nemwanakomana wake Shekemu, uye vanhurume vese veguta racho vakachecheudzwa. 25 Asi pazuva rechitatu, pavakanga vachiri kurwadziwa, vanakomana vaviri vaJakobho, Simiyoni naRevhi, hanzvadzi dzaDhina,+ vakatora mumwe nemumwe bakatwa rake, vakaenda kuguta racho vanhu vasingafungiri, ndokuuraya vanhurume vese.+ 26 Vakauraya Hamori nemwanakomana wake Shekemu nebakatwa vakabva vatora Dhina mumba maShekemu, vakaenda. 27 Vamwe vanakomana vaJakobho vakauya vakaona varume vakanga vaurayiwa ndokutora zvaiva muguta racho nekuti varume ivavo vakanga vasvibisa hanzvadzi yavo.+ 28 Vakatora makwai avo, mombe dzavo, madhongi avo, nezvese zvakanga zviri muguta nezvaiva muminda. 29 Vakatorawo zvinhu zvavo zvese, vakapamba vana vavo vese vadiki nemadzimai avo, uye vakatora zvinhu zvese zvaiva mudzimba. 30 Jakobho akabva ati kuna Simiyoni naRevhi:+ “Mandiunzira dambudziko rakakura nekuita kuti ndivengwe nevagari vemunyika ino, vaKenani nevaPerizi. Ndine vanhu vashoma kwazvo, uye vachaungana kuti vandirwise vondiparadza pamwe neimba yangu.” 31 Asi vakati: “Hanzvadzi yedu inofanira kubatwa sepfambi here?”
^ Kana kuti “kunoona vasikana.”
^ Kana kuti “Mweya wake wakanga usisade kusiyana naDhina.”
^ Kana kuti “Mweya wemwanakomana wangu Shekemu, hauchadi kusiyana nemwanasikana wenyu.”
^ ChiHeb., “ane chikanda chepamberi.”